Welcome to Raj Shrestha's Personal WEB Log 2: भारतीय प्रचार झूटो भएको भारतकै योगगुरु रामदेवको दाबी
Bibash Yatri wrote :
रामदेव नेपाल आएर बुद्ध नेपालमै जन्मीएको बताएर ताली खाएपनि उनीद्धारा लिखित जिवन दर्शन नामक पुस्तकमा बुद्धको जन्म स्थान भारत रहेको दावी छ ।
योग शिविर संचालन गर्न नेपाल आएका भारतिय योग गुरु शुक्रवार नेपाल आएलगत्तै भारतले अनावश्यक रुपमा विवाद झिकिरहेको गौतम बुद्धको जन्मस्थानको बारेमा बोले । योग शिविरको जानकारी दिन आयोजीत पत्रकारसम्मेलनमा रामदेवले बढो स्पष्ट शैलीमा भने–बुद्ध नेपालमा जन्मीएका हुन । यो विषयमा भारतले अनावश्यक रुपमा विवाद गर्नुहुन्न । उनको सो उद्घोषपछि कतै नेपाली जमिन मिचेर आफ्नै बनाएको राष्ट्रले बुद्धलाई पनि भारतिय नै बनाउने पो हुन कि भन्ने चिन्तामा परेका नेपालीले केही राहत पाए । तर, जव रामदेव आफैंले लेखेको पुस्तक जिवन दशर्नमा बुद्ध भारतमा जन्मीएका हुन भनेर लेखेको देखियो तव रामदेव आफैंपनि बुद्ध भारतमा जन्मीएको मिथ्या कुतर्क फैलाउन सक्रिय रहेको खुल्यो ।
उनीद्धारा लेखिएको पुस्तक जीवन दर्शनको पुष्ट आठमा उनले आफु जन्मीएको राष्ट्रको गुणगान गाउंदै कृष्ण,महाविर,चन्द्रशेखर आजाद, छत्रपती शिवाजीको नामसंगै बुद्धको नाम समेत उल्लेख गरेका छन । पृष्ट आठको ‘ जिवनके अनसुल्झे प्रश्नोका समाधान भन्ने शिर्षको तेस्रो प्यारामा उनले लेखेका छन्– मै सौभाइशाली हुं कि मैने उस पवित्र भुमि वा देशमे जन्म लिया है जहां योगेश्वर श्रीकृष्ण,बुद्ध, गुरु नानकदेव, गुरु गोविन्द सिंह, जैसे देव पुरुषो, महाराणा प्रताफ छत्रपती सिवाजी, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाषचन्द बोस, रामप्रसाद विस्मिल, भगतसिंह, राजगुरु प असफाक जैसे बिरो तथा महर्षि दयानन्द,व स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरक्ष पैदा हुंए है । मै अपने जस्वन पुपग से मां भारती कि आराधना करुगां ।
उनीद्धारा लेखिएको यो प्यारावाट स्पष्ट हुन्छ उनी समेत भारतिय प्रशासकहरु जस्तै बुद्ध भारतमा जन्मीएको झुठो दावी गर्नेमध्येका एक हुन । तर, नेपाल आएर बढो आर्दशवादी बन्दै बुद्ध नेपालमा जन्मीएको हो भन्दै नेपालीको सहानुभुती बटुल्ने प्रयास गरे । अनी हामी नेपालीले वाह क्या बोले रामदेवले भन्दै थपडी मार्दै जयजयकार गर्दै उनको पछि लाग्यौं ।
बुद्ध नेपालको कपिलवस्तुमा जन्मीएका हुन भन्ने पुष्टीका लागि कुनै तथ्य र आधारको खोजी गरिरहनुपर्ने अब आवश्यकता छैन । राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय पुरातत्वविद्हरुले कपिलवस्तुको लुम्बीनीमा फेला परेका प्राचिन तथ्य र प्रमाणहरुको आधारमा धेरै अगाडि नै पुष्टी गरिसकेका छन् । अहिले पनि लुम्बीनीमा रहेका प्राचिन अकाट्य प्रमाणहरु जीवीतै छन्, जसको अध्ययनगरी पौराणिकताको पुष्टी गर्न कसैलाई रोकिएको छैन । तर, भारतका कथित विद्धान, चलचित्रकर्मीमात्र हैन सरकार आफैं पनि बुद्ध भारतमै जन्मीएका हुन भन्ने गलत तथ्य पुष्टीमा लामो समयदेखी सक्रिय छन् ।
केही समय अगाडि आएको चलचित्र चांदनीचोक टु चाइनामा बुद्ध भारतमा जन्मीएको दावी गरिएको थियो । त्यत्ति मात्र हैन भारतिय विद्धान भनिनेहरुले लेखेको धेरै पुस्तकहरुमा पनि बुद्धको जन्मस्थान भारतै हो भनेर लेखेका छन् । उदाहरणका लागि न्युजविक इन्टरनेशनलका सम्पादक फरिद जकरियाले लेखेको दा पोष्ट अमेरिकन अल्डमा समेत बुद्ध भारतमा जन्मीएको लेखेका थिए । गौतमबुद्धको जन्मस्थान भारत हो भनेर पुष्टी गर्न भारतले गरेका यस्ता धेरै दुस्साहरु छन । जसलाई रामदेव जस्ता दोहोरो चरित्रधारीले पनि साथ दिएका छन् ।
यस्तै अर्को दुस्साहस जारी छ । भारत गौतम बुद्धको जन्मस्थान भारतमै हो भनेर पुष्टी गर्न उत्तरप्रदेशको आलिगढवामा धमाधम लुम्बीनीको नक्कल गर्दै संरचनाहरु निर्माण गरिरहेका छन् । जहां तिलौराकोटको समेत संरचना निर्माण भईरहेको समाचार सार्वजनिक भईरहेका छन् । आलिगढवा कपिलवस्तुसंगै सिमा जोडिएको क्षेत्र हो । उत्तरप्रदेशको पिपरहवा क्षेत्रलाई भारतले कपिलवस्तु नामाकरण समेत गरिसकेका रहेछन् । भारतको बोधगयामा बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको र उनको जन्म नेपालको कपिलबस्तुको लुम्बीनिमा भएको हो भन्ने तथ्य पुष्टी भईसकेको छ । जसलाई बारम्बार पुष्टीको आवश्यकता छैन । उनको मामाघर देवदह र उनको दरवार रहेको स्थान तिलौराकोटको भौगोलिक अवस्थाको नक्कल गरी जस्ताको तस्तै बनाएर बुद्धको जन्मस्थान भारतै भएको पुष्टी गर्न ज्यान फालेर लागेका छन् ।
मौखिक रुपमा बुद्धको जन्मस्थानको बारेमा रामदेवले सत्य बोलेपनि उनको पुस्तकले भ्रम छरिरहेको छ । यसका बारेमा संचारमाध्यमहरुलाई जानकारी नभएको हैन । तर एभिन्युज टेलिभिजन बाहेककाले यसलाई त्यत्ति महत्व दिएका छैनन । नेपालमा प्रतिष्ठीत भनिएकाहरु अहिले रामदेवका पछि लागिरहेका छन् । त्यसैले रामदेवलाई गुरु मान्दै जे भन्यो त्यही मान्ने प्रतिष्ठीत, जमातले उनलाई यो सोध्ने कि नसोध्ने रामदेवजी तपाईको पुस्तकमा किन बुद्धको जन्मस्थानको बारेमा गलत लेखेको ? उनको त्यो दुस्साहसको बोध गराएर उनलाई आफ्नो किताववाट सो गलत तथ्य सञ्याउन लगाउने कि नलगाउने ?
Posted by raj shrestha at 1:39 PM